एक जमाना विराज भट्टले नेपालमै रहेर राम्रै दाम कमाए । उनको फ्यान फलोइङ गज्जबको थियो । धमाधम चलचित्र हात परिरहेका बेला यताको उद्योग छोडेर उनी भोजपुरी चलचित्र लागे । त्यसपछि भने उनी नेपाली चलचित्रबाट टाढा भए । नेपाली दर्शकले उनलाई भुल्दै गए । दर्शकले लामो समय उनी अभिनित चलचित्र हेर्न पाएनन् । यद्यपी केहि बर्षअघि उनी चलचित्र ‘जय प्रशुराम’बाट पुनः नेपाली चलचित्र उद्योगमा फर्किए । तर, यो चलचित्र सोचेजस्तो सफल हुन सकेन । स्क्रिप्ट, प्राविधिक पक्ष तथा छायांकनमा जाने बेला निर्देशक परिवर्तन भएका कारण यो चलचित्र चिप्लिएको विराजको बुझाई छ । नेपाली चलचित्रमा कमब्याक भएपछि विराजको दोस्रो चलचित्र ‘साङ्लो’ दर्शकले छिट्टै हेर्नेवाला छन् । यो चलचित्र के कारण प्रतिक्षित छ भने, उनी आफै यो चलचित्रको निर्देशन गरेका छन् । आफै चलचित्र निर्माण गरेका छन् । यो चलचित्र कस्तो छ ? उनको समग्र चलचित्र यात्रा अब कसरी अघि बढ्छ ? उनीसँग लामै गफ गरिएको छ ।
पहिलो पटक आफैले चलचित्र बनाउनुभएको छ, कस्तो लाग्दैछ ?
म धेरै एक्साइटेड छु । दर्शकमा अपेक्षा धेरै बढेको छ । चलचित्र राम्रो बनाएको छु भन्ने लागेकाले यसपटक म सफल हुनेमा धेरै आशावादी छु ।
विगतमा तपाईँलाई दर्शकले निकै माया दिए, ति दर्शक अझै छन् ?
मैले डाटा लिएको त छैन । तर, सुटिङको बेला, मेला महोत्सव तथा विभिन्न कार्यक्रमको शिलशिलामा जिल्ला भित्र र बाहिर हिड्दा दर्शकले देखाउनुभएको मायाबाट मैले के बुझेको छु भने, मलाई दर्शकले बिर्सनुभएको छैन । समयअनुसार धेरै कुरा परिवर्तन त भएको छ । तर, मलाई माया गर्नुहुने फ्यानहरुको मुड परिवर्तन भएको छैन ।
कुनै बेला तपाईको टाउको पोस्टरमा राखेपछि मात्रै रिलिज अघि निर्माताको लगानी उठ्थ्यो । अहिले त्यस्तो छ ?
मुनाफा भन्दा पनि निर्मातालाई सुरक्षित गर्न जुन (एमजी) मिनिमम ग्यारेन्टी दिइन्छ त्यो अहिले पनि यो चलचित्रमा लागु भएको छ । मैले राम्रै एमजी पाएको छु । डिजिटल राइट्स पनि राम्रो छ । यसको संगीत पक्ष, ट्रेलर तथा पोस्टरबाट राम्रो प्रतिक्रिया आएकाले दर्शक थियटरमा आउने सम्भावना धेरै देखेको छु ।
केहि समय अघि यो चलचित्र हेरिसकेपछि साउथले पनि मेरो एक्सन कपी गर्न सक्छन् भन्नुभएको थियो, आवेगमा आएर धेरै बोल्नुभएको हो कि सिरियस नै बोल्नुभएको हो ?
हो, हामी सधै अर्काको चोर्ने ? हामीमा के कुराको कमी छ ? यो चलचित्रमा सम्पुर्ण कुरा हामीले क्रियशन गरेका छौं । खर्च धेरै गर्न नसकेपनि जति सकिन्छ काममा मिहेनत गरेका छौं । ५० करोड, १ अर्ब खर्च गर्न नसकिएला । तर, हामी नेपाली चलचित्रकर्मी के कुरामा कमी छौं ? भन्ने यो चलचित्र हेरिसकेपछि पक्कै थाहा हुनेछ । यो कुरा चलचित्र प्रदर्शन भएपछि दर्शकले पक्कै भन्नुहुनेछ, यो किसिमको चलचित्र पनि नेपालमा बन्छ ।
जोरायल गाउँपालिकाबाट १० लाख लिएर चलचित्र ‘साङ्लो’मा लगानी गर्नुभयो भन्ने आरोप लागेको छ, यस विषयमा खासै मुख खोल्नुभएन नि ?
यो चलचित्र निर्माणमा १० लाख खर्च भएको थियो ? हामीले चलचित्र निर्माणमा २ करोड भन्दा धेरै खर्च गरेका छौं । त्यो १० लाख त एउटा म्युजिक भिडियो समेत बन्दैन, कसरी चलचित्रमा लगानी गर्नु ? साथै, सरकारी निकायले कुनै चलचित्रलाई सहयोग गर्छ र चलचित्र बनाउन पाइन्छ भने त्यो त झन् खुसीको कुरा मान्नुपर्ने हुन्छ ।
पछिल्लो समय युवा स्टारहरुको निकै चर्चा हुने गरेको छ । तपाईका चलचित्र हेरेर हुर्किएका उनै तपाईका चेलाहरुले आफुलाई चुनौती दिएको कत्तिको महशुस गर्नुभएको छ ?
चलचित्र राम्रै पाउनुभएको थियो, कमाई पनि राम्रै थियो । नेपाली चलचित्र च्यात्तै छोडेर किन भोजपुरी चलचित्रमा छिर्नुभयो ?
कला भन्ने कुरा बग्ने पानी जस्तो हुन्छ । एक ठाउँ रोकिने कुरा हुँदैन । अबसर सबैलाई आउने कुरा हुँदैन, आउँछ भने त्यसबाट पछि हट्नु हुँदैन । मलाई भोजपुरीबाट अफर आयो, मैले स्क्रिप्ट मन पराए । पारिश्रमिक राम्रो थियो । सोहि कारण भोजपुरी चलचित्रमा काम गर्ने मुड बनाएँ । हामी नेपाली कलाकारलाई हलिउड र बलिउड तथा भोजपुरी चलचित्रबाट अफर आउँछ भने जानुपर्छ, आफ्नो कला देखाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
वलिउड जाने प्रयास गर्नुभएन ?
म वलिउड छिर्न सक्थेँ । तर, मेरो आफ्नै लापरवाहिले बलिउड जान सकिनँ । भोजपुरी चलचित्रको व्यस्तताका कारण बलिउडमा अडिसन दिने, सम्बन्धित निर्देशक तथा निर्मातासँग भेटघाट गर्ने काममा ध्यान दिएन । अहिले आएर लाग्छ, उहिल्यै बलिउड छिर्न प्रयास गर्नुपथ्र्यो ।
अब वलिउड छिर्ने सम्भावना छैन ?
किन नहुनु ? बाटो बन्द भएको छैन । धेरै बर्ष भोजपुरी चलचित्रमा व्यस्त भएपछि अब नेपाली चलचित्र पनि केहि समय काम गर्नुपर्छ भन्ने सोच आयो । सोहि कारण पछिल्लो समय नेपाली चलचित्रमा व्यस्त छु । तर, बलिउडका लागी मैले आगामी दिनमा पक्कै प्रयास गर्नेछु ।